ဟီယကာ (ဂြိုဟ်ရံလ) - ဝီကီပီးဒီးယား
ဟာဘယ်အာကာသတယ်လီစကုပ်မှ ရိုက်ကူးထားသည့် ဟောက်မေယာ၏ ညာဘက်အပေါ်ပိုင်းတွင် မှိန်ဖျော့စွာ တွေ့ရသော ဟီယကာ
ဟီယကာ သည် ဟောက်မေယာ၏ အပြင်ဘက်ကျပြီး ပိုကြီးသော ဂြိုဟ်ရံလတစ်စင်းဖြစ်သည်။ ဟာဝိုင်အီကျွန်းကြီး၏ ကင်းစောင့်နတ်ဖုရားမအမည်အား အစွဲပြုကာ ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းသည် မိခင်ဂြိုဟ်ပုအား 7007498800000000000♠49880±198 km အကွာအဝေးမှ 7006424396800000000♠49.12±0.03dရက်တိုင်း တစ်ပတ်လှည့်ပတ်သည်။ အချင်း ၃၀၀ ကီလိုမီတာရှိသည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည်။ ယင်းအား ဇန်နဝါရီ ၂၆ ရက် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ "Orbits and Masses of the Satellites of the Dwarf Planet Haumea (2003 EL61)" (2009). The Astronomical Journal 137 (6): 4766–4776. doi:10.1088/0004-6256/137/6/4766. Bibcode: 2009AJ....137.4766R.
↑ "The Short Rotation Period of Hi'iaka, Haumea's Largest Satellite" (December 2016). The Astronomical Journal 152 (6): 12. doi:10.3847/0004-6256/152/6/195. Bibcode: 2016AJ....152..195H. OCLC 6889796157. 195.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Wm. Robert Johnston (17 September 2008)။ (136108) Haumea, Hi'iaka, and Nāmaka။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဟီယကာ_(ဂြိုဟ်ရံလ)&oldid=683020" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။